Yaa qaatay lacagtii Jabuuti ugu deeqday Beledweyne? – Waare ayaa shaaciyey | Puntlander.com
← Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda, mudane Xasan Cali Khayre ayaa Wasaaradda Maaliyadda amar dul dhigay
Home Warar Silvia Romano oo la shaaciyey in madax furasho lagu sii daayey –… Silvia Romano oo la shaaciyey in madax furasho lagu sii daayey – Sidee wada-xaajoodku u dhacay? →
Yaa qaatay lacagtii Jabuuti ugu deeqday Beledweyne? – Waare ayaa shaaciyey
Lacagtii ay dowladda Jabuuti ugu deeqday biya xireenka loo sameynayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo mudo sanad ah la la’aa ayaa la ogaaday inay ku jirtay gacanta dowladda federaalka.
Waxaa la yaab noqotay sababta mudadii sanadka aheyd ee lasoo dhaafay lacagtaas wax loogu qaban waayey dadka reer Beledweyne, oo intaas dalbanayey in laga gacan siiyo biya xireen lagu sameeyo wabiga Shabeelle.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay amray wasaaradda maaliyadda inay fududeyso kharashka ku baxaya dadaallada looga hor tegayo in fatahaadi ka dhacdo magaalada Beledweyne sanadkan.
Beledweyne waxaa haatan ka socda carratuur iyo qorshayaal kale oo lagu xakameynayo biyaha wabiga Shabeelle, kuwaas oo ay wadaan guddiyo isku tashi oo ay iska aas-aaseen dadka ku nool magaalada.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka baxay magaalada Jowhar ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne, halkaas oo sida uu sheegay uu u tegay sidii uu talo iyo gacan siinba ugu biirin lahaa dadaallada socda ee lagu xakameynayo fatahaad dambe oo uu magaalada ka geysto wabiga Shabelle.